Fandokoana ho an'ny olon-dehibe - maninona ny sary hoso-doko dia tsy tsara ho an'ny ankizy ihany
Inona no ilainao hosodoko?
Ny hosodoko dia toy ny fanafody ho an'ny vatana sy fanahy
Ny fanaovana sary sy sary hosodoko dia zava-dehibe tsy ho an'ny ankizy kely ihany, fa ho an'ny olon-dehibe ihany koa. Amin'ny maha olon-dehibe anao dia misy lalàna maro hafa tokony harahina. Rehefa mandeha ny fotoana dia ampianarina ny ankizy hifandray amin'ny olon-kafa.
Fandokoana ho an'ny olon-dehibe
Ireo fizotran-javatra rehetra ireo dia mitohy mandra-pitadiavana asa mba hiainana fiainana tsy misy ahiahy amin'ny farany. Na izany aza, lazaina hatrany hatrany ny iray fa ny fandikana ny lalàna dia mety hisy vokany ratsy eo amin'ny asa sy amin'ny fiaraha-miasa.
Tsy mifandray amin'ny tenantsika intsony isika rehefa mandeha ny fotoana. Eo indrindra no nidiran'ny sary hoso-doko ho an'ny olon-dehibe. Ny antony maha-zava-dehibe izany na dia eo amin'ny olon-dehibe aza dia hazavaina ao amin'ny lahatsoratra manaraka.
Fa maninona ny olon-dehibe no mandoko?
Ny fomba fanaovana hosodoko dia fomba fialan-tsasatra. Izay mandray ny penina eny an-tànany ary manomboka manoritsoratra eo aminy dia miaina tsy misy ahiahy ary afaka mifantoka amin'ilay sary ihany. Ity dia fomba tsara iray handosirana ny adin-tsaina amin'ny fiainana andavanandro. Tsy natao ho zava-poana fa nantsoina hoe "fitsaharana famoronana".
Maherin'ny 32 isan-jaton'ny Alemanina no miady saina amin'ny fiainany andavanandro na ny toe-javatra iainany. Aleonay mandany fotoana amin'ny rivotra madio na hoso-doko fotsiny. Ny sary hosodoko amin'ny boky fandokoana dia mamerina mampatsiahy ny lasa, rehefa tsy nisy ahiahy.
Mandritra ny minitra vitsy dia afaka mandositra ny adin-tsaina ianao ary manokana ny sary hosodoko fotsiny. Tsy mampihena ny vatana fotsiny izy io, fa miteraka fahatsapana taloha ihany koa. Ny olon-dehibe rehetra dia mijanona ho zaza lalina hatrany. Na olon-dehibe aza tsy afaka manova izany.
Rehefa mandoko na manao sary dia mamoaka hormona fahasambarana izay misy fiatraikany tsara amintsika ny vatantsika. Miteraka fahafaham-po sy avonavona izany. Amin'ny ankapobeny ny fanafody tonga lafatra amin'ny vatana sy fanahy.
Na izany aza, ny fanaovana sary sy sary hosodoko dia mety hahasosotra ihany koa raha tsy tianao ny hahomby. Fa eo koa ny mety (doka misy karama) ho anao Boky fandokoana ho an'ny olon-dehibe. Zudem kann Malen einen positiven Einfluss auf das alltägliche Leben haben. Durch die Denkweise können neue Denkanstöße entstehen, die man ohne Malen nicht erkannt hätte. Es fällt einem leichter geistige Motive vorzustellen.
Amin'ny ankapobeny, misy fomba samihafa hametrahana ny fahaiza-mamorona anao amin'ny taratasy. Misy safidy telo samy hafa tanteraka. Na mandoko amin'ny fineliner ianao, penina fibre na pensilihazo miloko mahazatra.
Fineliners dia mety ho an'ny olona te-hampiseho ny fahaizany mamorona amin'ny fomba mazava sy mifanohitra. Hita amin'ny loko isan-karazany izy ireo. Noho izany ny olona dia afaka miasa miaraka amina sokajy loko miloko tsara ary avelany hihombo ny fahaiza-mamorona azy ireo. Somary lehibe ihany ny faritra, noho izany ny fanapahan-kevitry ny fividianana dia tsy tokony ho sarotra.
Ny solon'ny fineliner dia ny penina fibre. Izy ireo dia mety indrindra amin'ny hosodoko amin'ny faritra midadasika. Ny faritra kely sy filigree dia azo alaina miaraka amin'ny fineliner. Ny faritra maditra sy lehibe kokoa dia tokony hataon'ny penina fibra.
Samy nampiasa pensilihazo miloko tamin'ny fahazazany ny tsirairay. Ny fandokoana no sady mbola mahafinaritra indrindra eto. Miankina amin'ny tsindry sy ny hamafin'ny penina, ny alokaloka sy ny nuansa loko dia azo foronina tsirairay. Fepetra tanteraka tsy maintsy hialana tanteraka.
Manelingelina anao amin'ny fiainana andavanandro mampiady saina izany ary mamela anao ho zaza indray. Ny penina samihafa dia azo ampiasaina amin'ny hosodoko. Ohatra mahazatra dia ny fineliners, penina fibre ary pensilihazo miloko. Avelany handeha malalaka ny famoronana.
Rehefa mandoko, ankoatry ny zavatra hafa, ny hormonina fahasambarana dia mivoaka, izay miantoka ny fahasambarana sy ny fahafaham-po. Ho fanampin'izay, misy ny boky hosodoko tsy ho an'ny ankizy ihany, fa ho an'ny olon-dehibe ihany koa. Tsy maninona na vao manomboka na matihanina ianao. Na ny olon-dehibe aza dia afaka manadino ny ahiahiny amin'ny alàlan'ny boky fandokoana. Izay mila fiatoana dia tokony ho sahy haka ilay boky fandokoana.
Snuggly sy Yawny - tsy tsara tarehy ianao
Pejy fandokoana dia hilamina ny zava-drehetra | Fihetseham-po
Pejy fandokoana dia hilamina ny zava-drehetra